CeleLove - Page 170 of 264 - Welcome From Cele Love
မျက်စိအမြင်အာရုံ အားကောင်းစေမယ့် နည်းလမ်းများ
May 28, 2019 Cele Love 0
မျက်စိအမြင်အာရုံ အားကောင်းစေမယ့် နည်းလမ်းများ ဆေးပညာအရ မျက်လုံး ကြွက်သားတွေကို အသုံးမပြုရင် အားနည်း လာပါတယ်။ မျက်လုံးကြွက်သားတွေ အားကောင်းလာဖို့ ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို မမေ့ပါနဲ့နော် ….. (၁) မျက်လုံးကို တစ်နေကုန် အသုံးမပြုပါနဲ့။2နာရီ၊3နာရီကြာ အလုပ်လုပ်ပြီးရင် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ […]
အတွင်းသားအလှကိုအထင်းသားပေါ်လွင်စေမယ့် ဖက်ရှင်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့ သင်ဇာရဲ့အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
အတွင်းသားအလှကိုအထင်းသားပေါ်လွင်စေမယ့် ဖက်ရှင်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့ သင်ဇာရဲ့အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး Sexy ကျကျအမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေကြောင့် ပုရိသတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေဆင်းနေရသူလေးကတော့ မင်းသမီးချောလေးသင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဟာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေမှုတွေနဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့လျှောက်လှမ်းနေသူလေးပါ။ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရသော်လည်း သူမလျှောက်လှမ်းရမဲ့ပန်းတိုင်ကိုနောက်မဆုတ်ပဲလျှောက်လှမ်းနေသူလေးပါ …. ။ အတွင်းသားအလှကိုအထင်းသားပေါ်လွင်စေမယ့် ဖက်ရှင်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့ သင်ဇာရဲ့အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး 1 အတွင်းသားအလှကိုအထင်းသားပေါ်လွင်စေမယ့် ဖက်ရှင်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့ သင်ဇာရဲ့အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး […]
လက်ချောင်းထိပ်တွေဟာ ရေထိ များရင် ဘာကြောင့် တွန့်သွားရတာလဲ
လက်ချောင်းထိပ်တွေဟာ ရေထိ များရင် ဘာကြောင့် တွန့်သွားရတာလဲ For Zawgyi လက်ချောင်းထိပ်တွေဟာ ရေထိ များရင် ဘာကြောင့် တွန့်သွားရတာလဲ မိမိတို့ရဲ့ လက်ချောင်း ထိပ်တွေဟာ ရေထိတာ ၊ ဆိုတာ များရင် တွန့်သွားတာကို မြင်ဖူး ၊ ကြုံကြ ရမှာပါ ။ […]
မိန်းကလေးတွေဓမ္မတာလာချိန် ကိုယ့်ချစ်သူအမျိုးသားဆီကအ မျှော်လင့်ဆုံးအရာ… မိန်းက လေးတွေဓမ္မတာလာချိန် သူတို့ အမျိုးသား တွေဆီက ဘယ်အရာကို အလိုချင်ဆုံးလဲဆိုတာ သိကြလား… မိန်းက လေးတွေက ဒီလိုအချိန်ဆို ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးစိတ်ခံစားမှုလွယ်တာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအသိပါပဲ …. ။ သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေက […]
ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်အား မြန်​မာနိုင်​ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ပုဒ်မ (၅) ခုဖြင့် အမှုဖွင့်..
ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်အား မြန်​မာနိုင်​ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ပုဒ်မ (၅) ခုဖြင့် အမှုဖွင့်.. ရွှေပြည်သာ မီးသတ်ရှေ့ ကားရပ်ရာမှ ဆရာဝန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ရွှေပြည်သာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အကြား ပြသနာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်အမျိုးသမီး Live လွှင့်ဖော်ပြခဲ့မှုကလည်း လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကျော်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်အမျိုးသမီးကတော့ မီးသတ်ဦးစီးအပါအဝင် မီးသတ်ဝန်ထမ်း (၁၀) ဦးကို ပုဒ်မ (၄) ခုဖြင့် […]
အသံဖိုင်တွေက တမင်ဖမ်းထားတာ မဟုတ်ကြောင်း လို့ ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ သင်းသင်း
အသံဖိုင်တွေက တမင်ဖမ်းထားတာ မဟုတ်ကြောင်း လို့ ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ သင်းသင်း အလှမယ် သင်းသင်းကတော့ သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကို ကာမ လိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲဆို တော့မယ့်အကြောင်းကို မီဒီယာတွေကနေ တဆင့်ဖြေကြားလိုက် ပြီးနောက်မှာတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အမှန်တကယ် တရားစွဲဆို ထားပြီး အမှုရင်ဆိုင်နေရ ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးချိန်းတစ်ခုမှာတော့ […]
အလုပ်ပြုတ်တာကို မပြောရက်ခဲ့တဲ့ ယောက်ကျားဖြစ်သူကို အံ့သြစေခဲ့တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ထား… သူအလုပ်ပြုတ်နေကြောင်းသူ့ ဇနီးကို မပြောပြရက် ခဲ့ပါဘူး …။ မနက်ခင်းတိုင်းမှာ ပုံမှန်လိုပဲ မနက်စာစားပြင်ဆင်ပြီး သူ့ဇနီးလေးရဲ့ ပါးကိုနမ်းပြီး “ချစ်လေး ရေ အလုပ်သွားပြီ နော် ညနေမှပြန်တွေ့ ကြမယ် ကွယ် ”လို့ နှုတ်ဆက်တယ် […]
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ တွေ့ရင်ခဲ့ရင် ဒါလေးတွေတော့ ပြောဖြစ်အောင်ပြောလိုက်ပါ
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ တွေ့ရင်ခဲ့ရင် ဒါလေးတွေတော့ ပြောဖြစ်အောင်ပြောလိုက်ပါ သို့ …… တစ်ချိန်တုန်းက (အခုဘာမှမဆိုင်တော့တဲ့) ရည်းစားဟောင်းရေ ” ငါတို့တွေ ဘယ်တော့မှ စကားပြောကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သေချာတယ် …။ ငါလည်း မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါလေးတွေကိုတော့ ငါက နင့်ကို ပြောပြ ပါရစေေ နာ် […]
မိန်းကလေးများ ဆင်ခြင်ရမည့် ကြမ်း (၉) ကြမ်း
မိန်းကလေးများ ဆင်ခြင်ရမည့် ကြမ်း (၉) ကြမ်း မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် အသိပညာတိုးပြီး ယဉ်ကျေးလိမ္မာသော မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်များဖြစ်ကြစေရန် ApannPyay မှ မျှဝေပေးလိုက်ပါသည် ….. ။ ဒီပို့လေးကို တွေ့မြင်ရသူတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင် သိရှိ ဆင်ခြင်နိုင်သလို အခြားသော ညီမလေးများ အတွက် ဆက်လက်မျှဝေပေးစေလိုပါသည် ….. […]
မစိမ့်ထက်ရဲ့ ရုပ်အလောင်း ရောက်ရှိလာပါပြီ မစိမ့်ထက်ရဲ့ ရုပ်အလောင်း ယနေ့ညနေပိုင်းတောင်တက် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် အတူပူတာအိုမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ် ….. ။ ဂျိုး (ပူတာအို)Myitkyina News Journal မစိမ့်ထက်၏ ရုပ်အလောင်းကို တွေ့ရှိရသည်နေရာမှာ အမြင့်ပေ ၁၁၈၀၀ ရှိ ရေကန်အနီးတွင် ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ […]
« 1 … 169 170 171 … 264 »